ဝနျထမျးပါမဈနဲ့ လကျညှနျအောကျ ဝနျထမျးတှေ ဘယျလိုကားမြိုး သှငျးသငျ့လဲ – Daily Feed MM
ဝနျထမျးပါမဈနဲ့ လကျညှနျအောကျ ဝနျထမျးတှေ ဘယျလိုကားမြိုး သှငျးသငျ့လဲ
Admin_John | December 8, 2020 | Knowledge | No Comments
လကျထောကျညှနျမှူး ရာထူးနှငျ့ အောကျ ဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ ကားပါမဈလြှောကျတဲ့အခါ ပွညျတှငျးထုတျ SKD ကားတှကေို မလြှောကျသငျ့ပါဘူးဒီ ကားတှကေို လြှောကျလိုကျရငျ နိုငျငံတျောက လြှော့ပေးတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ ရမှာ မဟုတျပါဘူး.CBU အနနေဲ့ တငျသှငျးလာတဲ့ ကားတှကေိုသာ လြှောကျပါ ဥပမာ Toyota vios ဒီကားကို ပါမဈလြှောကျရငျ လကျရှိ ရောငျးနတေဲ့ ဈေးထကျ US $ 2600 သကျသာပါ့မယျ , မွနျမာငှေ ၃၄ သိနျးပါ။
နိုငျငံတျောက ရတဲ့ လစာကို ငှဖွေူအနနေဲ့ ပွပွီး ခုနှိမျရငျ ၁၁ သိနျးဝငျးကငျြ သကျသာမယျစုစုပေါငျး.၄၅ သိနျးဝနျးကငျြ သကျသာမှာပါ..ပွနျမရောငျးဘဲ စီးမယျဆိုရငျ ပုံမှနျလူတှကေ ၂၉၂ သိနျး ကသြငျ့မယျ့ကားကို ဝနျထမျးက ၂၄၄ သိနျး ဝနျးကငျြပဲ ကတြော့မှာပါ ပွနျရောငျးရငျ နောကျလူ က သူ့အမညျပေါကျ ဝငျငှခှေနျ ၁၅ သိနျးဝငျးကငျြပွနျဆောငျရမယျ့အတှကျ ၂၀ သိနျးလောကျ အမွတျရှိမယျ SKD ကားတှကေို သှားလြှောကျရငျအမွတျလုံးဝ မ
ရပါဝနျထမျးတှဟော ကားအကွောငျးနားမလညျကွပါဘူးဒီလို နားမလညျကွတဲ့ ဝနျထမျးတှအေပျေါ မှာ နားလညျကွတဲ့ လူ တှကေ မှနျကနျတဲ့ လမျးညှနျမှုကိုမပွုဘဲ ကိုယျ့အကြိုးစီးပှားအတှကျ ကိုယျ့ဘကျကို ဆှဲချေါနတောတှဟောလုပျသငျ့သလား သိတဲ့လူဟာ မသိတဲ့လူ ကို လမျးညှနျပွသပေးရမှာ မဟုတျဘူးလား???နောကျတဈခုကused cars ကို လလေံ ဆှဲဖို့ သှားမေးကွညျ့လိုကျပါ2019 model ကားတှဟော နိုငျငံတဈကာမှာ up to date ဖွဈ
တဲ့အတှကျ ဈေးမသကျသာပါဘူး , သုံးထားတဲ့ kilo. mile. မြားတဲ့ ကားတှသော ဈေးသကျသာတာပါ ဝနျထမျးပါမဈ အတှကျ ASEAN CBU အလုံးတှသော အသငျ့တျောဆုံးပါ ။
၁ ။ စကျရုံထုတျဈေး အပျေါ မှာ ၁၀ % ပဲ အမွတျတငျထားတယျ
၂ ။ အကောကျခှနျ ကငျးလှတျခှငျ့ရထားတယျ
၃ ။ ငှပေေး ငှယေူ စိတျခရြတယျ, HP အတှကျ အဆငျပွတေယျ
Toyota corolla cross ဟာ ရနျကုနျဆိပျကမျးအရောကျကို CIF. US $ 21700 Toyota series ထဲမှာEngine power 1800 ccဒီလို grade မြိုးကို ဒီဈေးနဲ့ ဘယျသူသှငျးပေးနိုငျလဲ။
CREDIT Myat Ko Ko
လက်ထောက်ညွှန်မှူး ရာထူးနှင့် အောက် ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကားပါမစ်လျှောက်တဲ့အခါ ပြည်တွင်းထုတ် SKD ကားတွေကို မလျှောက်သင့်ပါဘူးဒီ ကားတွေကို လျှောက်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော်က လျှော့ပေးတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး.CBU အနေနဲ့ တင်သွင်းလာတဲ့ ကားတွေကိုသာ လျှောက်ပါ ဥပမာ Toyota vios ဒီကားကို ပါမစ်လျှောက်ရင် လက်ရှိ ရောင်းနေတဲ့ ဈေးထက် US $ 2600 သက်သာပါ့မယ် , မြန်မာငွေ ၃၄ သိန်းပါ။
နိုင်ငံတော်က ရတဲ့ လစာကို ငွေဖြူအနေနဲ့ ပြပြီး ခုနှိမ်ရင် ၁၁ သိန်းဝင်းကျင် သက်သာမယ်စုစုပေါင်း.၄၅ သိန်းဝန်းကျင် သက်သာမှာပါ..ပြန်မရောင်းဘဲ စီးမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်လူတွေက ၂၉၂ သိန်း ကျသင့်မယ့်ကားကို ဝန်ထမ်းက ၂၄၄ သိန်း ဝန်းကျင်ပဲ ကျတော့မှာပါ ပြန်ရောင်းရင် နောက်လူ က သူ့အမည်ပေါက် ဝင်ငွေခွန် ၁၅ သိန်းဝင်းကျင်ပြန်ဆောင်ရမယ့်အတွက် ၂၀ သိန်းလောက် အမြတ်ရှိမယ် SKD ကားတွေကို သွားလျှောက်ရင်အမြတ်လုံးဝ မ
ရပါဝန်ထမ်းတွေဟာ ကားအကြောင်းနားမလည်ကြပါဘူးဒီလို နားမလည်ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် မှာ နားလည်ကြတဲ့ လူ တွေက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုကိုမပြုဘဲ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကိုယ့်ဘက်ကို ဆွဲခေါ်နေတာတွေဟာလုပ်သင့်သလား သိတဲ့လူဟာ မသိတဲ့လူ ကို လမ်းညွှန်ပြသပေးရမှာ မဟုတ်ဘူးလား???နောက်တစ်ခုကused cars ကို လေလံ ဆွဲဖို့ သွားမေးကြည့်လိုက်ပါ2019 model ကားတွေဟာ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ up to date ဖြစ်
တဲ့အတွက် ဈေးမသက်သာပါဘူး , သုံးထားတဲ့ kilo. mile. များတဲ့ ကားတွေသာ ဈေးသက်သာတာပါ ဝန်ထမ်းပါမစ် အတွက် ASEAN CBU အလုံးတွေသာ အသင့်တော်ဆုံးပါ ။
၁ ။ စက်ရုံထုတ်ဈေး အပေါ် မှာ ၁၀ % ပဲ အမြတ်တင်ထားတယ်
၂ ။ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားတယ်
၃ ။ ငွေပေး ငွေယူ စိတ်ချရတယ်, HP အတွက် အဆင်ပြေတယ်
Toyota corolla cross ဟာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက်ကို CIF. US $ 21700 Toyota series ထဲမှာEngine power 1800 ccဒီလို grade မျိုးကို ဒီဈေးနဲ့ ဘယ်သူသွင်းပေးနိုင်လဲ။
လပွညျ့ည နဲ့ ကရဝေးရှကျ ပကျပကျစကျစကျ စီးပှားတကျ
သင့်အိမ်က ကြွက်နဲ့ ပင့်ကူတွေကို ဝေးဝေးပြေးမယ့်